कोरोनाले तोड्यो सार्सको रेकर्ड, मृत्यु हुनेको संख्या ८ सय ३ पुग्यो — Imandarmedia.com
१फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै नेपलामा,अब के हुन्छ ?
२नेप्से परिसूचक स्थिर, कारोबार रकम घट्यो
३लगातार तेस्रो अर्धशतकसहित कुशलले बनाए विश्व कीर्तिमान
४किन पर्यो,पार्टी प्यालेसलाई मुख्य सिजनमै दोस्रो धक्का
५नेदरल्याण्डसंग नेपालले टस जितेर ब्याटिंग गर्दै, को-को परे अन्तिम-११ मा
६यी २७ सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको तयारी
७कसलाई आयो लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने अफर ?
८नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण
९वर्तमान राजनीतिकबारे कस्तो कदम चाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली
१०फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भरहेको छ कारोबार ?
११मौसम सम्बन्धि भर्खरै आयो यस्तो जानकारी, हावाहुरीसहित कहाँ-कहाँ पर्दैछ असिना पानी ?
१२जलबीरे पुल तयार, २६५ मिटर दूरी छोटियो,कहिले बाट पुल सञ्चालन गर्ने तयारी
९काठमाडाैं आउन चाहानेहरुका लागि आजदेखि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, हेर्नुहोस् सूचनासहित
१०कहिलेसम्म रहन्छ काठमाडाैंकाे वायु प्रदूषण ?
११भोलिदेखि सबै शिक्षण संस्था बन्द, आकष्मिकरुपमा ओली सरकारले किन गर्यो यस्तो निर्णय ?
कोरोनाले तोड्यो सार्सको रेकर्ड, मृत्यु हुनेको संख्या ८ सय ३ पुग्यो
काठमाडाैं । कोरोनाभाइरसको संक्रमणले सन् २००३ मा सार्स महामारीले निम्त्याएको प्रकोपलाई उछिनेको छ। चीनको हुबेई प्रान्तबाट सुरु भएको कोरना भाइरसले त्यहाँ मात्रै ७८० जनाको ज्यान लिइसकेको छ। यो भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म ८०३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् जसमा एक जनाको मृत्यु चीनबाहिर फिलिपिन्समा भएको छ।
सार्स महामारीका बेलामा सन् २००३ मा दुई दर्जन देशका ७७४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। कोरोनाभाइरसबाट हालसम्म ३४ हजार ८ सय जना संक्रमित भएका छन् जसमा लगभग सबैजसो चीनबाट रहेका छन्। यसगरी हुबेईका अधिकारीहरूले शनिबार कोरोनाभाइरसका ८१ नयाँ संक्रमितहरूको मृत्यु भएको जनाएको छ। यसले हुबेईमा मात्र यसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७८० पुगेको छ।
यस्तै कोरोनासंक्रमणको जोखिमलाई कम गर्ने हङ्कङले नयाँ क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरेको छ। उसले चीनको मुख्यभूमिबाट हङ्कङ प्रवेश गर्ने जोकोहीलाई दुई साताको अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने बताएको छ। नियम अनुसार चीनको मुख्यभूमिबाट हङकङ आउने पाहुना होटल तथा सरकारले बनाएका सरकारी क्वारेन्टाइन केन्द्रमा दुई सातासम्म एक्लै बस्नुपर्नेछ।
नियमको उलंघन गर्नेलाई उसले कडा सजाय हुने बताएको छ। हङ्कङमा कोरोनोभाइरस संक्रमणका २० वटा मामिलाहरु पुष्टि भएको छ। यसैगरी फ्रान्सले पनि सो भाइरसबाट आफ्नो मुलुकमा संक्रमित हुनेको संख्या ११ पुगेको जनाएको छ। शनिबार संक्रमणका ५ नयाँ बिरामी फेला परेको उसले बताएको छ।
चीनबाट फर्काइने नेपालीलाई राख्न खरिपाटीमा भवन खाली गराइयो
चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्नका लागि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दुईवटा भवन खाली गरिएका छन् । प्राधिकरणको दक्षिणतर्फको सबैभन्दा तल रहेको प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग र होस्टेल भवन खाली गराइएको हो ।
चीनको वुहानबाट नेपाल फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्न दुई भवन खाली गराएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण खरिपाटीका सहनिर्देशक केशवराज ओलीले जानकारी दिए । होस्टेलको तल्लो भवनको सम्पूर्ण सामान प्राधिकरणको माथिल्लो प्रशासनिक भवनमा सारिएको र वातावरण विभाग भवनको सामान पनि सारिएकोे उनले जानकारी दिए ।
भवन खाली गराउन होस्टेलमा रहेका बिरामीलाई फर्काइएको र दुवै भवनका सबै सामान झिकेर माथिल्लो प्रशासनिक भवनमा सारिएको छ । नेपाली सेनाको प्राविधिक, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत टोलीले अध्ययन गरी उक्त ठाउँको छनोट गर्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित प्राधिकरणमा ‘आइसोलेसन’ वार्डका रुपमा क्वारेन्टाइन राख्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
टोलीले अध्ययनका क्रममा १२४ जनालाई यहाँ राख्न सकिने जानकारी गराउँदै ठाउँ खाली गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डे, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख सवीन प्रधानलगायत सुरक्षा निकायको टोलीले शुक्रबार उक्त स्थानको अवस्था र तयारीको बारेमा अवलोकन गरी जानकारी लिएको कर्मचारीले बताएका छन् ।
टोलीले यो ठाउँको छनोट गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीले चीनबाट फर्काउन लागिएका नेपालीलाई राख्न आइसोलेसनमात्रै भएकाले माथिल्लो भवनमा कर्मचारीले काम गर्नसक्ने जानकारी गराएको बताउँदै सहनिर्देशक ओलीले सरकारको यो निर्णयसँगै यहाँका कर्मचारीमा त्रास फैलिएको बताए । कर्मचारीमा त्रास फैलिएकाले त्यस क्षेत्रमा बसेर काम गर्नसक्ने वातावरण नभएको भन्दै कर्मचारीलाई कहाँ लैजाने भन्ने निर्णय नभएको बताइएको छ ।
प्राधिकरणभित्र अहिले विभिन्न २६ वटा विभाग एवं कार्यालय रहेको र सबै विभाग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ । खरिपाटीमा क्वारेन्टराइन राख्ने सरकारको निर्णयसँगै स्थानीयवासीले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीयवासीले यो ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्न नदिने भन्दै दैनिक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकामार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
कोहलपुरमा २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु हेर्नुहोस बिबरण सहित।
नेपलमा आज मात्रै थपिए १२ सय बढी कोरोना संक्रमित
माधव नेपालसहित २० नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय
ओलीमा हिटलर प्रवृत्ति देखियो : माधव नेपाल
विद्यालय बन्द गर्नेबारे सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय
फ्लोर क्रस गर्नु अघि कर्णाली प्रदेशमा रातारात के के भयो ? हेर्नुहोस् सनसनीपूर्ण खुलासा
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, नयाँ जिल्ला इञ्चार्ज तोक्ने ओलीको तयारी
आज कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने